Sida loo abuuro kaararka kirismaska ​​ee shaqsiyan leh wajigeena | Abuurista khadka tooska ah
Sida loo abuuro kaararka kirismaska ​​ee shaqsiyan leh wajigeena
Pablo Gonder | | Sawirro, dhowr
Como sameyso kaararka kirismaska ​​ee gaarka loo leeyahay wejigayaga si aan kaaga u siino xafladahan oo hel toos ruuxa masiixiga dhamaan asxaabtaada iyo qoyskaaga. A hab kala duwan oo hal abuur leh si dhakhso leh loogu abuuro kaararka shaqsiyeed iyada oo aan loo baahnayn in aqoon loo yeesho barnaamij kasta oo naqshadeynta garaafka ah.
Wejigaaga geli sawir qosol badan helitaanka kaar gaar ah, ka duwan oo hal abuur leh a dhakhso badan oo fudud. Kirismaskan waxaad u diri kartaa asxaabtaada iyo qoyskaaga wax cusub, kala duwan oo la yaab leh. Internetka si dhakhso leh oo macquul ah, adigoo raacaya tillaabooyin yar oo yar ayaad awoodi doontaa inaad tan abuurtos madadaalo iyo kaararka kirismaska ​​asalka ah.
Tallaabada ugu horreysa ee lagu helayo kaarka Kirismaska ​​ayaa tan gelaya bogga internetka
Mar alla markii aan webka ku jirno, waxa ugu horreeya ee aan sameyno waa hoos ugu dhaadhac laga bilaabo bogga aan ka heli doonno buug-gacmeed leh naqshadaha ugu badan ee loo isticmaalo kaararka kirismaska. Waxaan dooran karnaa naqshadeynta aan aad u jecel nahay adoo riixaya sawirka.
Waxa xiga ee ay tahay inaan sameyno ayaa ah sawir noo soo dhig inaan awood u yeelano inaan ku sameysano kaarka kirismaska ​​wajigeena, sidaas ayaan ku gaarnay natiijo aad u qosol badan. Si fudud waxa ay tahay inaan sameyno ayaa ah inaan siino ikhtiyaarka aan ku dhejin karno sawirka.
Markii aan u tagnay inaan soo rarno sawirka daaqad cusub ayaa naga fureysa iyada oo na weydiineysa haddii aan dooneyno inaan sawir ka soo rarno kombuyuutarkeena ama ka Internetka, Waxaan dooranay midkood labada ikhtiyaar oo waxaan kusii wadnaa howsha.
Tallaabada xigta waa inay noqotaa hagaaji sawirkeena xagga naqshadda aan doorannay. Si tan loo sameeyo waxa kaliya ee aan sameyno waa dooro qeybta sawirka aan dooneyno ku arag qaabkeena. Qeybta bidix waxaan ku aragnaa sawirkeena asalka ah iyo qeybta saxda ah naqshadeynta labada sawir oo la isku daray, waa geedi socod aad u fudud maxaa yeelay kaliya waa inaan hagaajino xulashada na daneysa qaabkeena.
Waxa ugu dambeeya ee aan sameyn karno waa kudar qoraalka qaabkeena adoo adeegsanaya nidaam aad u fudud oo noo ogolaanaya inaan bedelno font, midabka iyo qiyamka kale ee aasaasiga ah.
Qaybta sare ayaa noo ogolaaneysa beddel qiimaha font: font, cabir ... iwm Waxaan sidoo kale ka dooran karnaa qoraalka degdega buugga.
Hadda waan awoodnaa sameyso kaararka degdegga ah ee fudud haddii waxa aan raadineyno aan bixinno wax xiiso leh iyada oo aan loo baahnayn in lala yimaado naqshad aad u xirfadaysan. Haddii aan dooneyno inaan abuurno kaararka boostada oo tayo sare leh oo aan ugu talagalnay annaga oo taabaneyna barnaamijka nashqad yar, waxa aan sameyn karno ayaa ah adeegsiga vector-yada iyo in la abuuro xitaa kaararka hal-abuurka leh.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Sida loo abuuro kaararka kirismaska ​​ee shaqsiyan leh wajigeena
Si hagaagsan ula shaqee Photoshop adigoo abuuraya kooxo lakab ah